Ogaden News Agency (ONA) – Dhukulaale oo lagu dabshitay baabuur cadawgu leeyahay iyo hawlgala ciidan oo ka socda meela kala duwan
Dhukulaale oo lagu dabshitay baabuur cadawgu leeyahay iyo hawlgala ciidan oo ka socda meela kala duwan
Posted by ONA Admin	/ April 30, 2012
CWXO ayaa fuliya hawlgalo dagaal oo joogto ah oo ay kula jiraan ciidamada cadawga. Hawlgaladan maalinla ah ayaa waxaa cadawga ka soo gaadha khaasre joogto ah waxaana inta badan looga furtaa hub iyo saanad ciidan oo kala duwan.
Cwxo oo mooraal ahaan ah mid aad uga sareeya kuwa cadawga ayaa waxaa ka go,an inay ka huleeliyaan cadawga dalkooda ku haysta xooga, shacabkoodana ay gaadhsiiyaan nolol xoriyadeed.
Hadaba kamiin uu CWXO ka galay 28 April 2012 wadada isku xidha Nusdariiqa iyo Gabagabo meesha loo yaqaan isgoyska Dhukulaale ayaa waxaa halkaa lagaga dabshiday hal baabuur iyo dhamaan ciidankii saraa oo aan waxba ka bixin.
Dhinaca kale ciidanka Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya oo todobaadadii ugu danbeeya si isdaba joog ah abaabul iyo dagaalo uga waday magaalooyinka Dhagaxbuur iyo Qabri-dahar ayaa waxay 29 April 2012 galeen gudaha magaalada Dhagaxbuur halkaasoo ay ku qabteen shirar xaafadaha kala duwan ee maagalada. Ciidamadii cadawgu way awoodi waayeen inay soo holiyaan kulamadaas dhex marayay shacbiga iyo CWXO, ka dib markii ay dhamaysteen Naftood-hurayaasha kulamdoodii ayaa waxaa horay u sii kaxeeyeen qaar ka mid ah gudoomiyayasha xaafada, iyadoo ujeedadu ahayd inay la soo qabadsiiyaan hawlaha halganka, kadiba way soo fasaxeen dhamaantood.
Labadaasi howlagl kadib ayay bacaad joojin aan inaba caadi ahayn ku sameeyeen dadkii shacabka ahaa waxayna ku qasbayaan in shacabku hubka qaato oo ay ka garab dagaalamayaan maleeshiyaadkii hawaarinta oo baryahan firxad iyo kala carar ku dhacay dharbaaxooytinka kasoo gaadhaya dhanka CWXO awgood.
30 April 2012 ayay sidoo kale ciidanka cwxo waxay galeen gudaha magaalada Qabridahar waxayna ka fuliyeen hawlga ciidan oo si fiican loo agaasimay. Hawlgan oo lala beegsaday rugta saraakiisha ee magaalada qabri-dahar goob ay ku daawadaan video-ga ayaa waxaa lala beegsaday gantaalo si fiican loogu liishaamay waxayna wararka ka agdhaw deegaamadaas sheegayaan dhulka lala simay goobtii iyo wixi ku jiray labadaba.
Intaas ka dib ayay ciidamdii fuliyay falkaas waxay guda galeen inay abaabul ka sameeyaan xaafadaha qaar iyagoo uga waramay isbadalada ku soo kordhay halganka. arintan ayaa markhaati u ah kalsoonida ka muuqata ciidanka jabhadda.
Wararaka kale een ka helnay Qabridahara waxay sheegayaan in CWXO ay taariikhdu ahayd 29-4-2012 mireen xero ka mid ah xeryaha ku yaala Dhuuma-dhuumoodka ee magaalada Qabridahare, waana markii labaad muddo usbuuc gudihii ah ay CWXO weerar ku ekeeyeen xeryaha ciidamada gumaysiga Itoobiya ee ka howl-gala degmada Qabridahare, iyadoo habeen hore uun ay ahayd markay howlgal culus ka fuliyeen xeryahaas. Wararka ka imanaya magaalada Qabridahare ee soo gaadhay xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in mirtii xalay khasaare balaadhan oo burbur u badan loo gaystay ciidamada wayaanaha,waxayna mirtaasi ugu sii darsantay weerarkii habeen hore oo ilaa iyo hada khasaarihiisii dhaawac la kala tirin la,yahay,dhimasho warkeedna daa.
23/4/12 Waxaa kale oo jira dagaalo mir ah oo aanan wali laga hayn wax faahfaahin ah kuwaas oo la filayo in cadawga uu ka soo gaadhay khasaare balaadhan waxayna ka kala dhaceen Golmadheedh, Golobore, Barmiilka, iyo goobo kale. Dagaal ka dhacay Hodan-wayne oo ka tirsan degmada Iimay bari ayaa cadawga lagaga dilay hal askari mid kalana lagaga dhaawacay.
Ciidanka Wadaniga Xoroynta Ogaadeenya oo tababar aad sareeya soo dhamaystay ahna ciidan ku caan baxay tabaha dagaalka, ayaa hantay kalsoonida shacabka S.Ogaadeenya oo rumaysan inay ka dhabayn doonaan balanqaadkooda.
Jimcaale awaare says:
Asc dhamaan akhyarta wan idan salamaya inta kadib dhulkena wu xorabay ee farxad bdna farxad bdna
Ogadenia xorowdaye ninkii naxoow nafta waaaaaaaaa